Yakanakisa THREADED ROD Mugadziri uye Fekitori | Jinggong
Donhedza muna zvimiso
KWENGUVA refu NUT
Tsvimbo yakamonerwa, inozivikanwawo sekuti mhete, inga tsvimbo yakareba yakamonerwa kumativi maviri; tambo inogona kuwedzera pamwe nehurefu hwakazara hwetanda. Izvo zvakagadzirirwa kushandiswa mukukakavara. Yakasungirwa tsvimbo mune bhar fomu inowanzozonzi izere-tambo.
Yakasungirirwa tsvimbo / Stud bhaudhi
"Waisted" kana "undercut" zvihwitsi, seinjini humburumbira misoro inochengeta
Nekuremekedza chimiro, zvipenga zvakaiswa muzvikamu zvitatu zvakakosha: "yakazara yakamisikidzwa mabhoti emabhaudhi", "mapombi-magumo emabhaudhi", uye "maviri-magumo ma bolts bolts". Imwe yeaya maapo ane mashandisirwo akasiyana. Seizvo zita rinoratidzira, zvizere zvakamisikidzwa zvihwitsi zvine yakazara muviri kufukidza netambo dzekuzara kubatanidzwa kwemasikati nzungu kana zvimwe zvakafanana zvikamu. Mapepa-ekupedzisira matambo ane tambo kumagumo ekupedzisira emuviri neakaenzana tambo yekubatanidza kureba, nepo maviri-magumo mhete mabhaudhi ane akaenzana tambo kureba pamativi maviri. Kunze kweizvi, pane zvipenga zvemabhaudhi, izvo zvakazara zvakamonerwa zvihwitsi zvine chamfered mativi, uye maviri-magumo matanda ane yakaderedzwa shank yeakasarudzika bolting mafomu.
Zvezvipenga zvisina kusungwa zvakakwana, kune maviri marudzi ezvidzidzo: akazara-muviri zviputi, uye zvepasi pemakumbo. Zvizere-muviri zvihwitsi zvine shank yakaenzana nehukuru hukuru hwetambo. Undercut studs zvine shank yakaenzana nehuremu hwepakati peiyo screw tambo. Undercut studs zvakagadzirirwa kuti zvirinani kugovera axial kushungurudzika. Mune yakazara yakazara muviri kushushikana kwakanyanya mune tambo kupfuura mune shank.
Undercut studs (yakakoswa tambo) zvakare yakasimba nekuti simbi iyi "yakakungurutswa" kusvika padanho hombe, haina kubviswa. Izvi zvinochengetedza zviyo zvesimbi, uye mune dzimwe nguva zvinotowedzera. Masipu akazara (tambo yakatemwa) haana kusimba nekuti simbi inobviswa kugadzira tambo, zvichikanganisa zviyo zvesimbi.
Undercut studs anongodiwa chete mukushandisa uko iyo stud iri pachena kune kuneta. Tambo dzakatemwa dzakakodzera chose kune akawanda mashandisirwo, kunyangwe kana dzakapetwa tambo dzingave dzakasimba zvishoma. Misa-inogadzirwa inosunga (akajairwa mabhaudhi uye zvihwitsi) zvinowanzo tenderedzwa, asi mabedhi zvikamu zvine tsika maficha uye madiki mijenya saizi angangodimburwa.
ZVOKUDYA-ZVINOKOSHA; YEMAHARA HUNHU, FAST INOTungamira NGUVA
GB / T19001-2016 / ISO9001: 2015; CERTIFICATE YOKuteerera / CE; UYE ZVAKAWANDA NATIONAL CERTICICATES.
WEDGE ANCHOR (KUPFUURA BOLT)
KeroMaodzanyemba akadziva kumadokero Industrial Park, Yongnian Dunhu, Handan Guta, Hebei Province